In ten years Zimbabwe will be better than South Africa: Julius Malema - ga('send', 'pageview');
By The Citizen and AFP
EFF leader Julius Malema has compared South Africa with Zimbabwe, saying the chaotic land grabs that led to widespread social and economic devastation in Zimbabwe may have to happen in SA, if ever the latter will deal decisively with the land issue.
Speaking in his first radio interview since spearheading the (controversial) successful adoption of the first step in Parliament to change the constitution to allow land expropriation without compensation, Malema compared South Africa with Zimbabwe at length, saying the chances of the former suffering widespread social and economic devastation we ever more likely.
AFP reported this week that farmer Robert Smart, who was pushed off his land in June 2017, was allowed to return to his farm within weeks of Mnangagwa’s inauguration, becoming the first — and so far only — white farmer to be given back his property.
Zimbabwe’s example should be followed in South Africa
President Cyril Ramaphosa said this week that land expropriation would not be a “smash and grab” attempt, and much consultation would take place to ensure the process would not harm food production, jobs and the economy as a whole.
Previous Zimbabwe’s Rufaro Masiiwa pioneers hackathon crackdown on development aid fraud
Next Queen of taste seeks to apply the science of SA-bottling into Zimbabwean wines